Ciidamada Turkiga oo Gacanta ku soo Dhigay Ragii loo Diyaariyay Inay Madaxweyne Erdogan Qaarjiyaan (VIDEO) - Hablaha Media Network
Ciidamada Turkiga oo Gacanta ku soo Dhigay Ragii loo Diyaariyay Inay Madaxweyne Erdogan Qaarjiyaan (VIDEO)
HMN:- Ciidamada dalka turkiga ayaa 9 ka mid ah 12 Sarkaal oo loo tababaray inay qaarijiyaan Madaxweyne Erdogan gacanta ku soo dhigay, ragani ayaa laga soo qabtay meel ku dhow Magaalada Marmaris ee Koonfurta Wadanka Turkiga.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan iyo qoyskiisa oo 15-kii bishii July fasax u joogay hotel ku yaala Magaalada Marmaris, ayaa lagu soo weeraray diyaarad helicopter ahayd, wax yar uun ka dib markii ay ka taggeen hotelkaasi. Madaxweynaha waxaa uu xilligaa u amba baxay Magaalada Istanbul.
Madaxweynaha waxa uu sheegay haddii 10 illaa 15 daqiiqo uu sii jooggi lahaa hotelka, sida uu qorshuhu ahaa la dili lahaa.
saraakiishan maanta la soo qabtay oo ka tirsan kuwa sida gaarka ah u tababaran, ayaa waxay ka tirsanaayeen illaa 37 Sarkaal oo loo soo carbiyay weerarka ka dhanka ah Hogaamiyaha Turkiga.
Wakaaladda Wararka Turkiga (Anadolu), ayaa shaacisay in gacanta lagu dhigay qaar kamid ah Saraakiishaasi, marka laga reebo 3 ka mid ah oo la la’yahay halka ay ku dambeeyaa.
Laamaha ammaanka, ayaa waxay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen Saraakisha weli maqan.
Madaxweyne Erdogan oo qabtay kulan kooban, ayaa sheegay in hogaanka Ciidamada Militeriga si ku meel gaar ah ay u hoos imandoonaan wasiirka Gaashaandigga ee dalkaasi.